Izindatshana zika-Adrian Chang Martech Zone |
Imibhalo nge Adrian Chang
U-Adrian Chang, umqondisi omkhulu wokubandakanyeka kwamakhasimende e-Informatica, uyiphayona lokuphatha umsebenzi webhizinisi. Ungumholi owine umklomelo ekukhiqizeni okufunwa yi-B2B, impumelelo yamakhasimende, nokumaketha kwedijithali, futhi uguqula indlela umsebenzi owenziwa ngayo.
Hlanganisa Izikhathi Ezingakaze Zibonwe Ukuhlela kabusha Indlela Esisebenza Ngayo
NgoLwesibili, Agasti 25, 2020 NgoLwesibili, Agasti 25, 2020 Adrian Chang
Kube noguquko olukhulu endleleni esisebenza ngayo ezinyangeni ezedlule kangangokuba abanye bethu kungenzeka bangaziboni ngokushesha izinhlobo zezinto ezintsha ebesivele zithola umusi ngaphambi kokuba kuhlasele ubhadane lomhlaba. Njengabamakethi, ubuchwepheshe emsebenzini buyaqhubeka nokusisondeza njengeqembu ukuze sikwazi ukusebenzela amakhasimende ethu kulezi zikhathi ezinengcindezi, noma ngabe sihamba nezinselele ezimpilweni zethu. Kubalulekile ukwethembeka kumakhasimende, njengoba